ရုပ်ရှင်တွေမှ အမိုက်စားအသင်းများ : အပိုင်း ၁ | Codashop Blog MM
Home Games ရုပ်ရှင်တွေမှ...
ရုပ်ရှင်တွေမှ အမိုက်စားအသင်းများ : အပိုင်း ၁
သင်တို့ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်က အမြဲထောင့်တစ်နေရာမှာ ပုန်းနေတတ်လား? စနိုက်ပါ သမားကအမြဲ ပျောက်နေတတ်လား? သင်တို့ရဲ့ Support/Healer က အမြဲတမ်းသေနေတတ်လား? ကဲခု ဟော်လဝုတ်က အဖွဲ့တွေ ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်ကျလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ Iron Man နဲ့ သူ့ Company။ Dominic Toretto တို့ မိသားစု။ စုံထောက် သုံးဖော်။ ဒီတစ်ဦးတစ်ယောက်စီက လှောင်အိမ် အချုပ်အနှောင်တွေစီက နေထွက်ပြေးတာတို့ Heist အကြီးကြီး တွေကနေလွတ်အောင်တို့ အခြားကမ္ဘာကနေ ကျုးကျော်လာတဲ့ ဂြိုလ်သားတွေစီကနေ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ကျပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှ အ‌ကောင်းဆုံးအသင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ Plan A က အဆင်မပြေရင်တောင် ဒီလူတွေက ဇွဲမလျော့ဘဲ အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ကျပါတယ်။
MCU(Marvel Cinematic Universe) ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီရောင်းအားကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြီးကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အတော်ဆုံ သူရဲကောင်းတွေပေါင်းစည်းထားပြီး ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ ဇာတ်ကွက်ကိုဖော်ပြပေးထားတာပါ။ အလွန်မိုက်လှတဲ့ အကွက်တွေကတော့ New York မြို့ကြီးမှာ Loko နဲ့ Chitauri တို့တိုက်ပွဲကြီးတို့ Sokovia မှာ Ultron ကို အနိုင်ရခဲ့ စိတ်မကောင်းစရာတို့ နာမည်အကြီးဆုံး Thano ကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အားလုံးမှာပါရှိတဲ့ စွမ်းရည်တွေ ကလွဲလို့ သူတို့ တစ်ဖွဲ့ထဲ စည်းစည်းလုံးလုံးနေနိုင်တယ်ဆိုတာက အခြားမတူညီတာတွေကို ဘေးချပြီး အရေးကြီးတာတွေကိုဘဲကြည့်လို့ Avengers တွေကပေါင်းစည်းနိုင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် မကောင်းတာလေးတွေရှိပြီး (Banner/Hulk and Thor) ၊ အတ္တကြီးပြီး မယုံကြည်မှုတွေရှိတာတောင် (Tony and Steve) ၊ ကြောက်စရာ အတိတ်တွေရှိပင်မယ့် (Natasha and Clint) ဒါတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အတူတူတိုက်ခိုက်ပြီး စည်းစည်းလုံးလုံးနေတာပါတယ်။ Avengers က လူဦးရေများတာဟာလဲ အင်အားတစ်ရပ်ဘဲဆိုတာကို ပြသပေးပါတယ်။
အဖွဲ့ : New S.H.I.E.L.D. မှာ Iron Man (Robert Downey Jr), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), and Hawkeye (Jeremy Renner) တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အဓိက အဖွဲ့ဝင်များ : Cap က အသင်းရဲ့ ခိုင်မာ တည်ငြိမ်နှလုံးသားပိုင်ရှင်ပါ။ သူက လူတိုင်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထားရင်း ပိုကြီးတဲ့ပုံကို အာရုံစိုက်နိုင်အောင်သူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သူ့ကျော်ကြားတဲ့ စကားကတော့ “Avengers, Assemble!” အသင်းကို ဒီစကားနဲ့ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်စေဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကားရူးသွပ်သူတွေဖို့ပါဘဲ။ လမ်းပေါ်မှာ ကားမောင်းပြိုင်တာကနေ ကားခိုးပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ရန် Dominic Toretto ရဲ့ မိသားစုရဲ့ ဒဏ္ဏာရီ ကတော့ အများကြီးကြိုးစားလာရတာပါ။ Downtown L.A. က ပြိုင်ကားမောင်းသမာတွေက DVD– Player ရိုက်ကူးမြှင့်တင်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ငယ်လေးကနေ ပိုကြမ်းပိုမိုက်တဲ့ မစ်ရှင်တွေလုပ်လာဖြစ်တာပါ။ ဒေါ်လာ မီလီယံပေါင်းများစွာကိုခိုးယူ ၊ Mexican ဂိုဏ်း တွေကိုအနိုင်ယူပြီး တံတားပေါ်က Tank ကားကြီးတိုက်ခံရတာတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လေယာဥ်ကိုဖြတ်ချပြီး ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုတောင် Sky Diving သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ! Action ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦး အနေနဲ့တော့ ဒီအသင်းကို ဝင်ရောက်ဖို့ကတော့ အိမ်မက်တစ်ခုလိုပါဘဲ။
လေးဘီးနဲ့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်မြောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ချစ်ခင်သွေးစည်းမှုက မိမိရန်သူကနေတောင် မဟာမိတ်တို့ မိမိ မိသားစု၀င်တို့ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုပြသပါတယ်။ ဒါက ဒီစီးရီးကို ပိုမို ကောင်းပြီး ဖျော်ဖြေမှု ဖြစ်လာဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
အဖွဲ့ : Dominic Toretto (Vin Diesel), Paul Walker (Brian O’Conner), Letty (Michelle Rodriguez), Mia Toretto (Jordana Brewster), Tej (Ludacris), Roman (Tyrese Gibson နှင့် အခြား A-List ဟော်လီးဝိတ် သရုပ်ဆောင်များ
အဓိက အဖွဲ့ဝင်များ : Paul Walker က တော့ ကားမောင်းပြိုင်တဲ့ ပိုစ်စတာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ကြမ်းတမ်းသော အယူခံဝင်မှု အားလုံးက အင်ဂျင်ကို ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် နှင့် အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။
မိန်းကလေးများ အင်အားလို့ကိုရှေ့ကို ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ချာလီရဲ့အိန်ဂျယ် ကတော့ အားလုံးရဲ့ အကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး မမြင်ရဖူးတဲ့ သူဌေးတစ်ဦးရဲ့ လက်အောက်က ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်အေဂျင်စီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဒီသုံးယောက်ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေပြည့်ပြီး အလွန်မိုက်ပါတယ်။
Natalie Cook ၊ Dylan Sanders နဲ့ Alex Munday ဆိုတာကတော့ သင်နေ့စဥ်ကြားနေရတဲ့ နာမည်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က ရုပ်ဖြတ် ၊ သူလျှိုတာနဲ့ ကိုယ်ခံပညာတတ်ကျွမ်းတဲ့ မှုခင်းတွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ သုံ‌ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် သူတို့က James သုံဆများတဲ့ အမျိုးသမီးဗားရှင်း တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အလွန်ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင် မကောင်းတဲ့ လူတွေကိုတိုက်ခိုက် ၊ ဖောက်ခွဲမှုတွေလုပ်ပင်မယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီအမသုံး‌ယောက်လိုနေနိုင်ပါသေးတယ်။ သူတို့ မစ်ရှင်တွေက ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ရလို့ သူတို့ဟာအင်အားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်တာကိုပြသဖို့ လွယ်ကူလှပါတယ်။
အဖွဲ့ : Angels တွေက Natalie Cook (Cameron Diaz)၊ Dylan Sanders (Drew Barrymore) နှင့် Alex Munday (Lucy Liu) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ Bosley အဖြစ် Props to their loyal sidekick Bosley played by ရယ်ရတဲ့ Bill Murray ကိုလည်းမေ့မရဘူးနော်။
အဓိက အဖွဲ့ဝင်များ : Natalie ကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မသိမသာပြောလို့ရပါတယ်။ ကောင်းကောင်း ကတတ်ပြီး ရဲ့စွမ်းသတ္တိ ရှိတဲ့ အပြင် သူမကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ ပါရမီပါပဲ။ Birdsong ကို အတုယူ အသံတုလုပ်နိုင်ပြီး သူတို့ နေရာကိုသိအောင်ရှာနိုင်တာကတော့ အံမခန်းပါဘဲ။ ဒီ လိုင်းကို မှတ်ထားပါ : : “It’saSitta pygmaea! A pygmy nuthatch! They only live in one place!”
ဒီဂန္ထဝင်ဇာတ်လမ်းကတော့ ချိုသာတဲ့ လွမ်းဆွတ်မှုကို အလေးပြုပြီး ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ။ The Mighty Duck က စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက နှစ်ရှည် အရှုံးသမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပင်လျှင် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြနိုင်သည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ပုံပြင်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဒါကတော့ နည်းပြ Bombay နဲ့ peewee District5hockey team (ခေါ်) the Ducks တို့ရဲ့ ရေခဲကွင်းပေါ်က ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးကိုရိုက်ပြထားတာပါ။
ဒါက လေးစားမှုကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်း နဲ့ အနိုင်ရရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ဟူသော နှလုံးနွေးထွေးဖွယ်ရာ ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Team Work ကြောင့်Duck သူတို့ရဲ့ Championship အထိ အခြားအသင်းဖြစ်တဲ့ the Hawks ကို အနိုင်ရရှိသွားတာပါ။
အဖွဲ့ : Gordon Bombay (Emilio Estevez) ၊ Charlie Conway (Joshua Jackson) ၊ Fulton Reed (Elden Henson) နဲ့Tommy (Danny Tamberelli)။
အဓိက အဖွဲ့ဝင်များ : နည်းပြ Bombay က တော့ ဒီအသင်းကို အမြင့်သို့တက်လှမ်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်များစွာရှိတယ်လို့ ယုံကြည်တာကြောင့် Conway က Duck အတွက်ထင်ရှာတဲ့ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articlePUBG Mobile Season 18: ‘Music Abilities’ + မြေပုံအသစ်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဂိမ်းကစားမှုကို နောက်တစ်ဆင့်သို့ယူဆောင်လိုက်ကျရအောင်
Next articleသင်က ဘယ်လို PUBG ကစားသမား တစ်ယောက်လဲ?